Ankanjo akanjo lava lava sy fohy ho an'ny vehivavy bevohoka
Ny akanjo hariva ho an'ny vehivavy bevohoka - ireo modely tsara indrindra ho an'ny reny hoavy
Ny zazavavy dia tokony hijery tsy hay tohaina na dia ao anatin'ny fotoana mahagaga toy ny fitondrana vohoka aza. Miaraka amin'ny fanafihany, miezaka ny hamorona fampiononana lehibe indrindra ho an'ny vatantsika sy ho an'ity fahagagana kely ity isika. Aza mandà mihitsy ny fitsidihanao hetsika manan-danja izay mitaky akanjo maotina .
Ankizy tsara tarehy ho an'ny vehivavy bevohoka
Maro ny marika sy karazan-java-maneho ho an'ny reny mitazona, ary porofo fa ny akanjo hariva amin'ny vehivavy bevohoka indraindray dia indraindray mahasarika kokoa noho ny akanjo tsotra. Ny zazavavy dia tsy voatery hipetraka ao an-trano ao anaty kalaom-bilia sy tapa-damba miandry ny zaza rehetra 9 volana. Fa zava-dehibe ny hahatsiarovako fa na dia zava-mitranga iray aza dia mitaky anao hanao akanjo "mahantra", ny fampiononana mandritra izao fotoana izao dia mitana ny anjara asa manan-danja indrindra.
Ny reny be fitiavana dia manahy mikasika ny zanany, na dia mbola tsy teraka aza izy. Noho izany raha manontany tena ianao hoe inona no sary hifidianana hetsika amin'ny hariva amin'ny toe-draharaha, eto dia fitsipika vitsivitsy izay tokony ho fantatrao:
Mifidiana akanjo avy amin'ny lamba voajanahary. Tsy natao fotsiny ho an'ireo safidy hariva, fa koa ny parda manontolo. Ny vatany dia tokony hahatsapa ho mendrika sy malalaka araka izay azo atao.
Aza manao zavatra izay hikorontana, hikorontana, hikoriana, ary amin'ny fomba rehetra dia manelingelina ny asan'ny rà fampidiran-dra.
Adinoy ny kiraro avo. Ity sombiny ity dia efa lasa sangisangy mampihomehy, fa maro ireo vehivavy dia mbola tsy manaraka ity fitsipika ity ary mametraka ny zanany ho atahorana na dia amin'ny volana faha-9 aza. Matetika izany dia tsy mifarana amin'ny zavatra tsara.
Ary toro-hevitra avy amin'ny fotoanan'ny reny "Manaova satroka!": Mipetraha amin'ny toetr'andro. Na inona na inona maha-zava-dehibe ny zava-mitranga, aza mitondra akanjo miaraka amin'ny soroka misokatra amin'ny andro mafana, na dia "eny, eto 20 metatra mandeha."
Ankizy lava lava ho an'ny vehivavy bevohoka
Nahoana ny halavan'ny zavatra vita amin'ny akanjo? Satria eo amin'ny tranga misy antsika dia manana tombony maro izy. Ny hatsaran-tarehy lava dia hahay handanjalanja kokoa ary hanamaivana ny masonao, na dia toy ny baolina aza ny vavonao. Ankoatr'izany, dia miteraka fanafody ny tongotra ary tsy mitaky ny fisian'ny kodiarana. Afaka mitondra kiraro na kiraro amin'ny kiraro haingam-pandeha ianao ary mahatsapa ho mahavariana.
Lamina lava lava ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny fampakaram-bady - ny safidy tonga lafatra. Ny fampakarambady dia maharitra maharitra ela fa tsy ny reny rehetra any aoriana no afaka mijanona ao mandritra ny takariva. Ny fampiononana amin'ny akanjo toy izany miaraka amin'ny fepetra fandinihana ireo torohevitra voalaza etsy ambony ireo dia hahafahan'izy ireo mankafy ilay hetsika lavitra kokoa. Zava-dehibe ny tsy fandefasan'ny fehikibo ny vavony ary ny zavatra rehetra dia maimaim-poana sy mahafa-po araka izay azo atao.
Ankizy hariva volo ho an'ny vehivavy bevohoka
Ny akanjo fohy ao anatin'ity fotoana mahafinaritra ity dia tena mahafinaritra. Saingy tsy rehefa sarotra ny mandrakotra ny fehy. Ny akanjo miloko mena amin'ny lobaka dia mampiseho ny fisehony, raha tsy izany, dia ho tsotra loatra izany. Amin'ity tranga ity dia misy vahaolana: mametraka kapa mangina ho anao amin'ny kiraro na kiraro amin'ny kirany ambany amin'ny fehiloha ambany. Tsy sarotra ny hahita kiraro izay hijery tsara ary tsy hanery anao hiova amin'ny kiraro baskety rehefa afaka ora vitsivitsy. Ary ny tena zava-misy iray momba ny fanamarihana amin'ny reny hoavy: Ny akanjo fotsy hariva amin'ny vehivavy bevohoka dia mibanjina afa-tsy amin'ny teny fohy.
Ankizy mandanjalanja ho an'ny vehivavy bevohoka
Misy maromaro sy antsipiriany marobe izay tsy maintsy manatrika raha mitady akanjo maotina amin'ny vehivavy bevohoka ianao. Ny loko marevaka indrindra dia mena. Tsara tarehy amin'ny ombidia boribory izy, manasongadina ny maha-vehivavy ny reny hoavy. Belt - fitaovana tsara indrindra. Mety ho ravina eo ambanin'ny tratra na fehikibo tena izy, ny asany fototra dia ny mamolavola sy manasongadina ilay tarehimarika. Ity safidy ity dia handresy. Misy karazany maro hafa izay tena tsara.
Gail Evening Dress for Women Pregnant
Ny akanjo hariva ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny fomba grika dia tsara kokoa noho ny amin'ny modely mahazatra noho ny halavany sy ny romanticism. Hijery vaovao sy mahitsy ianao. Aza amboarina amin'ny akanjo fanampiny, ampy ho an'ny volo tsara tarehy eo amin'ny volonao ary misy peratra eo amin'ny rantsan-tànanao. Raha ny momba ny volo, dia misy lavaka misy randran-doko na fomba fanao mahazatra miaraka amin'ny onja mavesatra. Tokony hifanaraka amin'ilay sary ny makiazy ary ho malemy fanahy.
Lacy akanjo lava ho an'ny vehivavy bevohoka
Ny Lace dia mijery tsara sy mahaleotena amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny endrika rehetra. Ny akanjo lava eny am-baravarana ho an'ny vehivavy bevohoka dia hanery ny rehetra hiresaka momba ny toerana misy anao, fa koa ny endrika mahatalanjona. Eto amin'ity lafiny ity, mila mifidy ny fitaovana mety ianao. Ny firavaka dia tsara kokoa ny mifidy amin'ny metaly sarobidy amin'ny loko iray na firavaka iray, manahaka azy ireo. Zava-dehibe ny loko volamena na volafotsy mifampiankina amin'ny fomba rehetra, ary ny volany dia tsy misarika loatra ny saina. Raha marika lehibe izy io, dia tsy tokony hamaivanina ny singa hafa rehetra.
Fitafy akanjo hariva ho an'ny vehivavy bevohoka
Ny fitafiana fingotra dia manantitrantitra ny fisehon'ny renim-pianakaviana miandry, izay tsy voatery hidinika ao ambadiky ny t-shirts sy ny pataloha. Ny akanjo lava fohy sy lava, maizina sy maivana ho an'ny vehivavy bevohoka dia mahafinaritra raha toa ka mampiseho ny tarehinao tsara tarehy amin'ny toerana mahagaga. Ireo kintan'i Hollywood, izay voatery ho mahavariana hatrany sy any rehetra any, dia mandrehitra io fitsipika io ary matetika no miseho amin'ny endriny eny amin'ny lalan-tsoroka.
Na dia ny fitafiana tsotra indrindra aza dia mila singa mety ho an'ny sary azy. Zava-bidy goavam-be, raha tsy misy zavatra marefo ny akanjo. Ary eto, na inona na inona mety holazaina, dia mila hosoka isika. Noho izany, tsara kokoa ny manao fampakaram-bady sy ambany, satria tsy mifanentana ny trano biletà na kiraro amin'ny haingam-pandeha.
Vehivavy kapaoty ho an'ny vehivavy bevohoka
Raha tianao ny handrakitra ny fanamiana anao amin'ny akanjo marevaka, dia tsara fitondran-tena amin'ny akanjo hariva amin'ny vehivavy bevohoka amin'ny endriky ny kapoty. Ny iray amin'izy ireo dia hampiseho anao ho toy ny andriamani-bavy Grika na mpanjakavavy. Tena zava-dehibe tokoa ny fisafidianana ireo singa tsara ho an'ny fandaharana toy izany. Tsy voatery foana ny mijery ity tranga ity, firavaka sy firavaka goavana, noho izany dia tsara kokoa ny manolotra zavatra tsara, fa kely.
Ankizy manao akanjo maitso ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny fampakaram-bady
Misy karazana karazana ho an'ny akanjo hariva ho an'ny vehivavy bevohoka, fa ny tsotra sy malaza indrindra dia fomba mahitsy amin'ny tany. Tahaka ny tsara tarehy sy ny vehivavy izany. Ny akanjo toy izany dia miraikitra amin'ny hetsika tena manan-danja, toy ny kintana ho an'ny baolina kitra Oscars na maingoka. Tokony hiseho ny fisehoan-javatra. Zavamaniry mahafinaritra na volon-koditra, takarivon'ny hariva ary clutches kiraro kely - ny tsara indrindra ho tonga lafatra.
Kintana bevohoka amin'ny akanjo hariva
Efa nahita an'i Angelina Jolie sy Jessica Albu teo amin'ny lalan-tsakafo tao amin'ny sary ianao, saingy ity lisitra ity dia afaka mitohy tsy misy fiafarany. Olivia Wilde dia nibanjina tsara ny masony. Nifantoka tamin'ny lokony izy ary nameno ny sary tamin'ny endriny maloto. Ilay kanto mahafatifaty, Kim Kardashian, dia nibanjina manga manga amin'ny akanjo manga miaraka amina lohalika lalina. Ny tonon-kiraro tsy misy feon-tsiramamy miaraka aminy dia mifanaraka tanteraka amin'ny fijery ankapobeny. Ny akanjo maizimaizina ho an'ny vehivavy bevohoka dia azo raisina toy ny kintana Hollywood, sy ny zazavavy tsotra.
Ao amin'ny sary tsirairay sy ny fanjakana rehetra, dia afaka mijery tsara ianao raha fantatrao ny fomba sy ny zavatra tokony hatao na ny akanjo garderobe. Tsy mila mandany dolara an'arivony ianao amin'ny akanjo, kiraro ary akanjo, toy ny olo-malaza, mba hijanonana ho mendrika na dia ao anatin'ny fotoana mahafinaritra antenain'ilay zaza aza. Tandremo ny fahasalamanao, fa aza adino ny mijery ny mahagaga ho an'ny hafa sy ny tenanao!
Jeans maimaim-poana - sary 50 nalaina sary tamin'ny lamaody
Shoes Shoes Guess
Ny pantaloons sy ny pataloha
Models amin'ny akanjon'ny sekoly
Vlasyoney amin'ny alika - fitsaboana
Vovobonin'ny ravina - toetra mahasoa
Mofomamy miaraka amin'ny firaketana hoditra
Ny alika mafy indrindra
Neurosonographie momba ny zaza vao teraka
I Nicholas Holt sy i Brian Holly no teraka voalohany
Kara Delevin sy Selena Gomez
Fanampiana voalohany ho an'ny cystitis
Boky, lalao, kilalao ho an'ny fetin'ny fararano
Inona no hitanao amin'ny fahaterahanao?
Fampandrosoana zaza iray ao anatin'ny 6 volana - zazavavy iray
Andron'i Maria Magdalena
Ny sakafo tsy mahazatra indrindra avy amin'ny McDonald manerana izao tontolo izao!
Enterocolitis - soritr'aretina